Siyaasiin iyo hawlwadeenno iswiidhish ah oo tamashle ku taga Koonfur Afrika - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Geri ku sugan dhul-dooxeed Afrika ku yaal. Sawirle:Ulf Myrestam/Sveriges Radio
Siyaasiin iyo hawlwadeenno iswiidhish ah oo tamashle ku taga Koonfur Afrika
La daabacay måndag 10 februari 2014 kl 13.25
Barnaamijka Kaliber ee idaacadda P1 ayaa kashifay in 27kii safar oo la xiriira hawlaha kaalmada dibedda ay 19 ka mid ah weheliyeen dalxiis lagu tago meelaha xayawaanka lagu daawado. Sida ay idaacaddu soo xigateyna waxaa midkiiba dibed-baxaas dalxiiska ku baxa lacag u dhexeysa 250 ilaa 1 000 karoon oo ay mararka qaarkood iska bixiyaan dadka ka qaybgelaya, mararka kale ay ku casumaan maamulada degmooyinka dalkaas Koonfur Afrika.
Waa wax aad xun haddii ay siyaasiinta iyo hawlwadeenada kaalmada dibeddu oggolaadaan in lagu casumo dalxiis safaari ah marka ay qayb ka yihiin safarada la xiriira kaalmada dibedda. Sidaasna waxaa barnaamijka P1 Kaliber u sheegtay wasiiradda kaalmada dibedda Hillevi Engström kadib baaritaanka barnaamijka P1 Kaliber.
- Waa in aad looga hortagaa waayo wax qiime yar oo la isku casumey ayey su’aali ka iman kartaa. Haddii ay run tahay sida barnaamijka laga siidaayey, waxaan kolkaas u arkaa arrin aad u xun, ayey tiri Hillevi Engström.
Dhanka kale Roland Gustbée oo ah guddoomiyaha urur-goboleedka koonfurta Södra Småland, kana mid ah siyaasiinta mas’uulka ka ah mashruuca Kronobergsprojekten ayaa arrintaan ka yiri:
- Waxaan anigu qabaa in aysan dhaafin xadkii macquul ahaa. Waa safar hal maalin ah oo aan lahayn habeen-dhaxyo qaali ah, ayuu yiri Roland Gustbée.
Baaritaanka Kaliber wuxuu muujiyey in saddex meelood oo meel waqtiyadii socdaalkaas lagu qaatey dhaqdhaqaaqyo aan shaqo ku lahayn mashruuca halkaas loo tegey. Waxyaalaha waqtiga lagu dhumiyana waxaa ka mid ah safarada daawashada xayawaanka iyo tamashlayaal oo ay ka mid yihiin in la tago suuqyada farshaxanka, beeraha libaaxa lagu hayo iyo wershadaha khamriga biirta lagu sameeyo.
Sannad walba waxay hay’adda SIDA 40 milyan oo karoon kaalmada dibedda ka mid ah ku bixisaa mashaariic laga wado degmooyin ay degmooyin kale oo iswiidhish ah xiriir iskaashi leeyihiin. Lacagahaasna waxaa maamusha xarunta caalamiga ah ee dimoqraadiyadda hoose oo loo gaabiyo ICLD. Iyada ayaana baartaa oo oggolaata qoraalada ay degmooyinku soo gudbiyaan iyo bixinta lacagahaasba.
Isha: P1 Kaliber